Ion Transmitter / Ion Sensor Vagadziri & Vatengesi - China Ion Transmitter / Ion Sensor Factory
Pamhepo Ion Meter T4010
Maindasitiri epamhepo Ion mita iri pamhepo yemhando yekutarisa uye yekudzora chishandiso ine microprocessor. Inogona kuve yakagadzirirwa neIon
inosarudza sensor yeFluoride, Chloride, Ca2 +, K +, NO3-, NO2-, NH4 +, nezvimwe.
Maindasitiri epamhepo Ion mita iri pamhepo yemhando yekutarisa uye yekudzora chishandiso ine microprocessor. Inogona kuve yakagadzirirwa Ion inosarudza sensor yeFluoride, Chloride, Ca2 +, K +,
NO3-, NO2-, NH4 +, nezvimwe.
Pamhepo Ion Meter T6510
Ion inosarudza electrode imhando yeiyo electrochemical sensor iyo inoshandisa membrane mukana kuyera chiitiko kana kusangana kweion mune mhinduro. Kana zvasvika pakusangana nemhinduro ine maion ayo anofanirwa kuyerwa, ichagadzira kusangana neiyo sensor pane iyo interface pakati payo inonamira membrane uye mhinduro. Ion chiitiko chakanangana zvakananga nekwanisi ye membrane. Ion inosarudza ma electrode anonzi zvakare membrane electrode. Iyi mhando yemagetsi ine yakasarudzika electrode membrane iyo inosarudzika inopindura kune chaiwo maion. Hukama huri pakati pekugona kweiyo membrane yemagetsi uye izvo ion zvemukati zvinofanirwa kuyerwa zvinoenderana nenzira yeNernst. Mhando iyi yemagetsi ine hunhu hwesarudzo yakanaka uye ipfupi nguva yekuyanana, ichiita iyo inonyanya kushandiswa chiratidzo electrode yekugona kuongorora.
Iyo calcium electrode ndeye PVC inonamira membrane calcium ion inosarudza electrode ine organic phosphorus munyu sechinhu chinoshanda, chinoshandiswa kuyera kusangana kweCa2 + ions mumhinduro.
CS6718 Dambudziko Sensor (Calcium)
Kushanda kwe calcium ion: Iyo calcium ion inosarudza electrode nzira inzira inoshanda yekuona iyo calcium ion yezviri mumuenzaniso. Iyo calcium ion inosarudza electrode inowanzo shandiswa mumidziyo yepamhepo, senge maindasitiri epamhepo calcium calcium ionisi yekutarisa, calcium ion inosarudza electrode ine hunhu hweyero yakapusa, nekukurumidza uye kwakaringana mhinduro, uye inogona kushandiswa nePH uye ion metres uye online calcium ion vaongorori. Iyo inoshandiswawo muiyoni inosarudza ma electrode detectors e electrolyte analyzers uye kuyerera jekiseni vaongorori.
Iyo online chloride ion sensor inoshandisa yakasimba membrane ion inosarudza elektroni yekuyedza ma chloride ions ari kuyangarara mumvura, ayo anokurumidza, akapusa, akarurama uye ane mari.
Etu ese maIon Selective (ISE) maelektrode anowanikwa mune akawanda maumbirwo uye hurefu kuti akwanise akasiyana siyana ekushandisa.
Aya maIon Selective Electrode akagadzirirwa kushanda nechero ipi yemazuva pH / mV mita, ISE / mita yemasere, kana yakakodzera on-line zvishandiso.
Kufambisa TDS Sensor, Titanium Alloy Kuitisa Shungu, Ph Sensor Electrode, Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu, Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Chlorophyll Sensor,